Ma inagaa iska damaashaadna 18 May, mise aduunweynaha ayaynu gaadhsiinaa Qadiyadeenna? – W/Q: Ali Dhinbil | Burco Media
Ma inagaa iska damaashaadna 18 May, mise aduunweynaha ayaynu gaadhsiinaa Qadiyadeenna? – W/Q: Ali Dhinbil
July 11, 2013 | Filed under: Articles-Maqaallo | Posted by: admin
Runtii 22kii sano ee ka soo wareegtey xornimadii Somaliland waxay isaga badnayd damaashaad iyo is xasuusin ku saabsan gooni isu taageena iyo inaynu la soo noqonay xornimadeena. Laakiin dadaal fiican ulamaynaan iman sidii maalinta xornimadeena iyo aqoonsi doonkeena aynu aduunka ugu soo bandhigi lahayn. Metalan saxaafada aduunku waxba kama qorto, madax kale oo ka socota Africa amaba Arab league amaba Europe na lama soo casuumo, xitaa haday yihiin kuwo low ranking aan jago ka hayn wadamadooda. Weliba waxay ahayd in la soo casuumo masuuliyiinta qadiyadeena tageera ee ku jira xisbiyada ka jira UK iyo wadamada la midka ah.
Waxaan maqli jirey sheeko ah, in berigii isticmaarka ingiriisku ina heystey inuu odayaal reer Somaliland u qaaday wadanka Cadan si u soo tuso quwada iyo awooda ingiriiska ee ciidan iyo gawaadhi dagaalba leh. Wax kalena ma hay nee wuxuu doonayey si markay ugu soo noqdaan Burco Iyo Hargeisa aay ugu sheekeeyaan quwada ingiriiska ee aay soo arkeen, oo markaa uu yahay quwad aan loo babac dhigi karayn, oo markaa halkaa sheekadu ku fidi lahayd dadka hamigu ka hayo inay daandaansadaan isticmaarkii ingiriisku. Waxaan uga danleeyahay, bal inakuna aynu caalamka soo casuuno si aay u ogadaan isku duubnaanteena iyo xornimo doonkeena inaga dhabta ah .
Horta way iska cadahay inaan madax sare u imanayn dawlada yar oo aan la ictiraafsanayn, laakiin taa macnaheedu maaha inaanayn soo casuumi Karin ‘’low ranking officials’’ oo ka kala yimaada xisbiyada xukunka haya amaba kuwa mucaaradka ah ee dawladaha Europe.
Runtii Dawladeenu waxaad moodaa beryahan inay dadaal ugu jirto sidii qadiyada Somaliland loo fahansiin lahaa aduunweynaha, khaasatan Europe, USA, iyo Middle East, waxaana taa ku tusaysa markay kiraysteen lobbying and communications firm Glover Park Group, oo runtii ahayd inaynu sanado ka hor samaysano shirkad qadiyadeena inoogu lobby garaysa si international level ah. Runtiina waxaa mahad naq badan leh our foreign Minister Honourable Mohamed Omar, oo runtii ah nin wax garad ah, oo ka adag hawshiisa, oo weliba ah a well spoken markay timaado shirarka aduunka ee lagaga doodayo qadiyada Somaliland. Waana nin aad iyo aad ugu munaasab ah inuu noqdo future Somaliland President.
Waxaan kaloo aad iyo aad ugu faraxnay hadaanu nahay Somaliland diaspora warqadii uu Madaxweynaha Somaliland ku soo qoray The Guardian Newspaper, isagoo ka hadlaya waxa ay dawladiisu uga soo qayb geli weydey shirkii Somalia ee lagu qabtay London 7th of May. Iyo weliba isagoo for the first time, sidaan u malaynayo madaxweynuhu u soo bandhigay dicision makers of the world khaasatan wadankan UK, arin ku saabsan Somaliland, oo runtii xili munaasabana ku soo qoray jariiradan caanka ah ee siyaasiyiinta iyo waxgaradka wadankani akhristaan. Waxaanaan filyaa inaanay arintani suurta gasheen hadaynaan lahayn shirkad sida Glover Park Group, oo arimaheena aduunka u gaadhsiisa, khaastan dhinaca Media, oo aynu aad ugu danbeyney marka loo eego dawlada federalka ee Somalia.
Hadaba hadaan dib ugu soo noqdo, su’aashaydii ahayd maynakaa cidla ka boodboodna mise maalinta xoriyadeena aduunweynaha ayaynu gaadhsiinaa jiritaankeena iyo gooni isu taageena; waxay aniga ila tahay in laba waxba la sameeyo, waa mida horee waa in siyaasiyiinta reer Europe iyo Gulf States, iyo weliba kuwa qadiyadeena taageera lagu soo casuumo maalinta xuska ee inaguu soo food leh. Waa ta labaade waa inaynu aad ugu dadaalnaa dhinaca ka soo qayb gelinta International Media, khaasatan Al Jazeera, oo dhinaca arigtada carabta inaga caawinaysa iyo UK Channel 4, madaama aay wararkooda ku soo qaataan wadamada third world ka ah ee aan badiyaaba ahmiyada badan aduunku siinin in warka lagu soo qaato.
Hadii shirkada Glover Park Group firm ay inaga caawinayso sidii loo soo casuumi lahaa some decent world newspapares iyo international televisions, dee taasina kaba sii wanaagsan, oo qaar live news uga soo daaya dabaaldega 18th of May, iyo qaar wax ka qora maalinta ku xigtaba runtii waxtar weyn ayay inoo yeelan lahayd. Waxaa kaloo jira programmes bil amaba weekly ah oo aay leeyihiin televisionada aduunku sida CNN, BBC, Al jazeera amaba Channel 4, oo aay ku soo qaataan waxyaabo farabadan oo aduunka ka dhaca. Waxaa markaa fiican in Shirkadan dawladu soo kiraysatey ee Glover Park Group aay aad isugu taxalujiso inay special programme ka sameeyaan Wadankeena Somaliland, khaasatan ayaamo ka dib markaynu u dabaal degno sanad guuradii 22 aad ee la soo noqodka xornimadeena.
Markaa haday shirkada shaqadeedu tahay in aduunweynuhu fahmo qadiyada Somaliland, aay markaa dawladu aad ugu pressure garaysaa inay dhinaca newsmedia iyo weliba shirarka aduunka amaba international forums, including the UN general assembly, aay inaga caawiyaan si aay u hor dhigi lahaayeen qadiyadeena. Runtii anigu shaksi ahaan waxaan jeclaa in shirkad aad caan u ah, oo lacag badan qaadanaysa laynoo soo kirayn lahaa si aay sucmada somalialand kor ugu qaadaan. Runtiina hadaanay dawladu amaba xitaa shirkadaha waaweyni aanay lahayn lobby firms arimahahooda iyo qadiyadooda u dooda, dee markaa waynu iska wada ognahay inaanay wax ala wax ukala soconayaa ma jirayaan.
Waxaan ku soo gabagabeynaynaa mansha’allah xaaladeenu meel fiican ayay inoo maraysaa, marba marka ka sii danbeysana arimaheenu waay inoo sii hagaagayaan, laakiin waa inaynu samir iyo dulqaad aynu la nimaadna, oo markaa qofwalbaaba uu ka shaqeeya nabada iyo danta guud ee inaga dhaxaysa, si aynu maqaam sare u gaadhno. Ummad kasta oo burburtana waxa kala burburiya sida quraankuba inoo sheegay marar badan isku xidhnaan la’aanta iyo fusuqa aay dadku sameeyaan. Waxaan kaloo Reer Somaliland kula talin lahaa waar fidnada shayga la yidhaahdo iska ilaaliya, waayo sida quraanku inoo sheegay fidnadu iyada dilka qof ama dad la dilo ka xun, waayo qof la dilay waa la xalili karaa lakiin hadii umadau isku rogmato masiibadu qof walba gurigiisa ayay ugu imanaysaa, oo cidina ka badbaaadi mayso halaaga iyo xumaanta ku kala dhacda umada ku walaalowdey diinta islaamka.